Elifas asɛm a edi kan (1-21)
Ɔserew Hiob wɔ ne nokwaredi ho (7, 8)
Ɔkaa asɛm a honhom bi ka kyerɛɛ no kyerɛɛ Hiob (12-17)
‘Onyankopɔn nni gyidi biara wɔ n’asomfo mu’ (18)
4 Ɛnna Elifas+ a ofi Teman no kae sɛ: 2 “Sɛ obi yɛ sɛ ɔreka asɛm bi akyerɛ wo a, ɛbɛyɛ wo ahometew anaa? Na hena na obetumi aka sɛ ɔrenkasa?* 3 Ampa, woateɛ nnipa pii so,Na woahyɛ nsa a emu agow den. 4 Nea ɔrehwe ase no, wo nsɛm ma ɔsɔre gyinaa hɔ,Na wɔn a wɔn nkotodwe ahodwow no, wohyɛɛ wɔn den. 5 Afei a ebi ato wo yi, woabotow;Ebi kaa wo yi de, w’abam abu. 6 Sɛ wusuro Onyankopɔn a, ɛnde adɛn na wunni ahotoso? Sɛ w’abrabɔ di mu a,+ ɛnde adɛn na wunni anidaso? 7 Mepa wo kyɛw, kaakae wo tirim: Woahu sɛ wɔasɛe obi a ne ho nni asɛm da? Da bɛn na wuhui sɛ wɔakum onipa trenee? 8 Nea mahu ne sɛ wɔn a wofuntum bɔne*Ne wɔn a wodua ɔhaw no, ɛno ara na wotwa. 9 Onyankopɔn home sɛe wɔn,Na n’abufuhyew ma wɔn awiei ba. 10 Gyata bobom, na gyata a onnyinii pii pow,Nanso agyata a wɔn ho yɛ den* mpo, wɔn se bubu. 11 Nam a enni hɔ nti, gyata wu,Na gyata mma bɔ hwete. 12 Metee asɛm bi wɔ kokoam,Na etwaa m’asom ketewaa bi. 13 Anadwo a nnipa ada hatee no,Minyaa anisoadehu bi a ɛhaw m’adwene, 14 Ahopopo kɛse bi tew sii me so,Na ehu hyɛɛ me nnompe nyinaa ma. 15 Honhom bi betwaam wɔ m’anim;Me ho nwi sɔresɔree. 16 Honhom no begyinaa hɔ dinn,Nanso manhu sɛnea ɛte papa. Biribi begyinaa m’anim;Ɛhɔ tɛm dinn, na afei metee nne bi sɛ: 17 ‘Wohwɛ a, onipa dasani betumi ateɛ asen Onyankopɔn? Ɔbarima ho betumi atew asen ne Bɔfo?’ 18 Hwɛ! Onni gyidi biara wɔ n’asomfo mu,Na n’abɔfo* nso, onya wɔn ho mfomso. 19 Ɛnde wohwɛ a, wɔn a wɔtete dɔtedan mu,Wɔn a wɔn fapem yɛ dɔte no,+ obebu wɔn dɛn?Wɔyam wɔn ntɛm sen abubummabaa! 20 Wɔwɔ hɔ anɔpa, ebedu anwummere no, na wɔayam wɔn koraa;Wɔyera korakora, na ɛmfa obiara ho. 21 Wɔte sɛ ntamadan a wɔatwetwe mu nhama ama atutu agu fam; Wowuwu a wonnim nyansa biara.
^ Anaa “hena na obetumi aka ne kasaboa ahyɛ ne yam?”
^ Anaa “wodwen adwemmɔne.”
^ Anaa “n’asomafo.”